Computer model brand အလိုက်BIOS ထဲ ကို ဝင် လို့ ရ မဲ့Key မှတ်တမ်းပါ။ ~ မိုးညိုသား
11:02 PM နည်းလမ်းများ No comments
Windows ပြန် တင်တော့ မဲ့မိမိ ကွန်ပျူ တာ ရဲ့BIOS ထဲ ကို ဝင် ဖို့ အတွက် Acess key ကို သိဖို့ လို ပါတယ် ။ဒါမှ မိမိ စိတ်ကြိုက် BIOS ထဲ ကို ဝင် ပြီး Boot ချိန် နိုင် သလို လို သလို ပြု လုပ် လို့ရ မှာ ပါ ။ ဒီနေ့ တော့ကွန်ပျူ တာ တိုင်း အတွက် BIOS ထဲ ကို ဝင် လို့ ရ မဲ့ သက်ဆိုင် ရာ (Acess ) Key လေး တွေ ကို တစ် နေ ရာ တည်း မှာ တစ် စု တစည်း ထဲ လေ့လာ လို့ရ အောင် ပြန် လည် မျှ ဝေ ပေး လိုက် ပါတယ်။
ပါဝါ ဖွင့် ပြီးနောက် ( Del or F2 ) ကိုနိုပ်ပါ။
The Acer Veriton L480G အတွက် ဆို ရင် F12.
Acer Altos 600 serverဆို ရင် တော့Ctrl+Alt+Esc key (သို့ မဟုတ် ) F1 keyကိုနိုပ်ပါ။
သက်တမ်း ကြာ နေ တဲ့Acer computers model များ ကိုတော့F1 or Ctrl+Alt+Esc keys ကိုနိုပ်ပြီး
BIOS ကို ဝင် နိုင်ပါတယ်။
F10 ကိုနိုပ်ပြီး BIOS ထဲ ကို ဝင် နိုင်ပါတယ်။
သက်တမ်း ရင့်မော်ဒယ် Compaq computers များ F1, F2, F10, or Del key ကိုနိုပ်ပါ ။
Pavilion, TouchSmart, Vectra, OmniBook, Tablet စီးရီးများ အတွက်
F1, F10, F11 ကိုနိုပ်ပါ။
HP Tablet PCs များ အတွက် က တော့F10 or F12. ကိုနိုပ်ပါ။
အခြား HP computers F2 (သို့) Esc keys ကိုနိုပ် ရ တာ လဲ ရှိ ပါတယ်။
များ အတွက် Dell logo ပေါ် လာ တာ နှင့်F2ကို နိုပ်ပါ။.
Dell desktops နှင့်laptops old model များ အတွက် Ctrl+Alt+Enter or Del ( သို့ မဟုတ် ).
Fn+Esc or Fn+F1.ကိုနိုပ်ပါ။
eMonster, eTower, eOne, S-Series, T-Series များ အတွက်
Tab (သို့ မဟုတ် ) Del ကိုနိုပ်ပါ။
အခြား eMachine computers များ F2ကိုနိုပ်ပြီး BIOS ထဲ ကို ဝင် နိုင် ပါတယ်။
LifeBook, Esprimo, Amilo, Tablet, DeskPower များ အတွက်
DX, FX, One, GM, GT, GX, Profile, Astro များ အတွက်
F1 ကို နိုပ်ပါ။
မော်ဒယ် ဟောင်းနေတဲ့computers များ F2 ကိုနိုပ်ပါ။
F1ကို ချက် ခြင်း နိုပ်ပါ။
IBM computers (အဟောင်းတွေနဲ့laptops တစ်ချိူ့ကတော့ ) F2 key ကိုနိုပ်ပေး ရပါတယ်။
ThinkPad, IdeaPad, 3000 Series, ThinkCentre, ThinkStation စီးရီးများ အတွက်
F1 (သို့) F2 ကိုနိုပ်ပါ။
Lenovo အခြား မော်ဒယ်များ အတွက် Ctrl+Alt+F3, Ctrl+Alt+Ins, or Fn+F1 ကို တွဲ နိုပ်ပါ။
ClientPro, TransPort များ အတွက်
F1, F2(သို့) Delကိုနိုပ်ပါ။
PowerMate, Versa, W-Series များ အတွက်
F2 ကိုနိုပ်ပြီး BIOS ထဲ ကို ဝင် ရောက်ပေး ပါ။
8900 Series, 9000 Series, Pulsar, Platinum, EasyNote, imedia, iextreme များ အတွက်
F1, F2,(သို့) Del ကိုနိုပ်ပြီး BIOS ထဲ ကို ဝင် ပါ။
Series 'x' laptops များ အတွက်
Notebook Laptops, Actius UltraLite များ အတွက်
အရမ်း ဟောင်း နွမ်း နေ တဲ့ Sharp PCs များ အတွက် (Setup Diagnostics Disk ) ကိုအသုံးပြု ပြီး BIOS ထဲ ကို ဝင် ပါ။
F2 (သို့) Del ကိုနိုပ်ပါ။
VAIO, PCG-Series, VGN-Series များ အတွက်
F1, F2 or F3 ကိုနိုပ်ပါ။
Portégé, Satellite, Tecra, Equium များ အတွက်
F1 (သို့) Esc ကီး ကို နိုပ်ပါ။
ARI / ALR / AST (Advantage) - များ အတွက် Ctrl+Alt+Esc (သို့) Ctrl+Alt+Del keys.ကိုနိုပ်ပါ။
Cybermax - အတွက် Esc key ကိုနိုပ်ပါ။
Tandon -အတွက် Ctrl+Shift+Esc keys.ကိုနိုပ်ပါ။
Medion -အတွက် Del key.ကိုနိုပ်ပါ။
Ultimate Boot CD Download လို ချင် တယ် ဆို ရင်တော့ 
ultimate-boot-cd.joydownload.com မှာ ဝင် ရောက် ယူ နိုင်ပါ တယ်။